XOG CULUS: Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo bedelay mowqifkiisii hore iyo Go’aan uu ka qaatay Farmaajo | JIGJIGA.NET
XOG CULUS: Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo bedelay mowqifkiisii hore iyo Go’aan uu ka qaatay Farmaajo
Published on December 2, 2017 by admin · No Comments
Madaxweynihii hore ee dowlada federalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bedelay mowqif uu hore u qaatay, isagoo dib ugu soo laabanaya siyaasadda.
Shir dhowaan ugu soo dhammaaday dalka Turkiga saaxiibada madaxweynihii hore iyo kooxdiisii Qabyo ayaa la xaqiijiyay in kooxdan ay go’aansatay olole xilka looga tuurayo madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Xasan Sheekh ayaa si aan la fileyn uga tanaasulay wareegii saddexaad markii ay isu soo hareen isaga iyo Farmaajo, waxaana markaas kadib uu xilka u wareeejiyay si aad loo bogaadiyey oo sharaf leh, isagoo ku baaqay in dowladda cusub lala shaqeeyo oo waqti la siiyo la iskana ilaaliyo qalalaase siyaasadeed.
Arrimahaas oo dhan kadib waxaa muuqata in madaxweynaha hore oo hadda ah xildhibaan aan weli kasoo xaadirin fadhiyada Baarlamaanka dibad joogna ahaa intii uu xilka banneeyay inuu hadda u soo jeestay sidii xilka looga tuuri lahaa madaxweynihii ka danbeeyay oo aan xilka dhameysan muddo sanad ah.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa la xaqiijiyay inuu qeyb ka yahay olole mooshin xil ka qaadis ah oo diyaarintiisa ay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, kaasoo ah wadaan xubnihii ugu dhowaa ee dowladiisa